granulated organic fatịlaịza mmepụta akara. - YiZheng Arọ Machinery Co., Ltd.
Fatịlaịza organic dị iche iche na-enye ihe ndị dị n'ime ala, si otú a na-enye ihe ọkụkụ ihe ndị na-edozi ahụ ma na-enyere aka iwulite usoro ala dị mma. Fatịlaịza Organic nwere nnukwu ohere azụmaahịa. Site na mgbochi na mmachi eji nwayọ eji eme ihe n'ọtụtụ mba na ngalaba ndị dị mkpa, mmepụta fatịlaịza ga-abụ nnukwu ohere azụmaahịa.
A na-ejikarị fatịlaịza organic eme ihe iji meziwanye ala ma nye nri maka uto ihe ọkụkụ. Ha nwekwara ike ire ngwa ngwa mgbe ha banyere n'ime ala, na-ahapụ nri ngwa ngwa. Ebe ọ bụ na a na-eji fatịlaịza na-edozi ahịhịa na-eji nwayọọ nwayọọ, ha na-adịru ogologo oge karịa fatịlaịza organic. Ojiji fatịlaịza organic emeela ka mbibi nke osisi ahụ belata na gburugburu ala.
Mkpa ọ dị inwekwu fatịlaịza fatịlaịza fatịlaịza n'ime fatịlaịza organic granular:
A na-ere fatịlaịza ntụ ntụ n'ọtụtụ mgbe na ọnụahịa dị ọnụ ala. Nhazi ọzọ nke fatịlaịza fatịlaịza nwere ike ịbawanye uru nri site na ịgwakọta ihe ndị ọzọ dị ka humic acid, nke bara uru maka ndị na-azụ ahịa iji kwalite uto nke nnukwu ọdịnaya na-edozi ahụ nke ihe ọkụkụ na ndị na-etinye ego ka ha ree ezigbo ahịa na ezi uche.
Granular organic fatịlaịza mmepụta usoro: edemede - granulation - ihicha - jụrụ - sieving - nkwakọ ngwaahịa.
Nye usoro nhazi dị iche iche nke ahịhịa fatịlaịza granular iji gboo mkpa ndị ahịa, yana akụrụngwa dị mfe iji rụọ ọrụ.
1. Nwuo na granulate
N'oge usoro edemede, a na-agwakọta compost ntụ ntụ na ihe ọ bụla achọrọ ma ọ bụ usoro iji mee ka nri ya bara uru. Jirizie fatịlaịza fatịlaịza ọhụrụ mee ka agwakọta ghọọ irighiri. A na-eji granulator fatịlaịza na-eme ka ihe na-enweghị ntụ ntụ na ọdịdị. The ọhụrụ organic fatịlaịza granulator adopts a mechiri emechi usoro, enweghị akụkụ okuku ume na ájá orùrù, na elu arụpụtaghị.
2. Akọrọ na jụụ
Usoro ihicha adabara osisi ọ bụla na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-acha ntụ na nke granular. Ihicha nwere ike belata iru mmiri nke ihe na-esi na ya pụta, belata okpomọkụ dị na 30-40 Celsius C, na granular organic fatịlaịza mmepụta akara jiri jiri igwe na-ekpo ọkụ na igwe na-ekpo ọkụ.
3. Nnyocha na nkwakọ ngwaahịa
Mgbe granulation, organic fatịlaịza ahụ ga-ekpuchi iji nweta achọrọ urughuru size na wepu ahụ na-adịghị kwekọọ na urughuru nke nke ngwaahịa. Ala sieve igwe bụ a nkịtị sieving akụrụngwa, nke a na-akacha eji maka nhazi ọkwa nke okokụre ngwaahịa na edo grading nke okokụre ngwaahịa. Mgbe sieving, edo urughuru hà organic fatịlaịza ahụ na-ntukwasi na packaged site akpaka nkwakọ igwe ebu site a eriri ebu.